Semalt wuxuu qeexayaa tallaabooyin wax ku ool ah si loo ciribtiro trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241
Trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 waa weerarkii Trojan ee khatarta kaas oo la helayin ay khatar ku tahay dhammaan kombiyuutarada adduunka. Fayruskan wuxuu ku faafaa websaydhka waxaana si toos ah isku-dhejiyaa kombiyuutar inta lagu jiro isticmaalaha 'dhaqdhaqaaqyada shabakada internetka sida furitaanka email aan la garanayn, daawashada bogagga pornographic iyo download freeware. Trojan, hal marrakibay, waxay saameyn ku yeelataa kombiyuutarka martida adoo farageliyay faylalka iyo faylasha nidaamka iyo sidoo kale samaynta kuwa cusub si loo abuuro cabsijahawareerka dhismaha - security camera for shop. Inta lagu jiro weerarrada, Trojan waxay xadeeyaan nidaamka daba-galka si ay u sii daayaan dhowr qawaaniin khatar ah sidanacasta, gooryaanka, warwareega iyo adware kombiyuutarka.
Farshadda Trojan waxay saameyneysaa kombiyuutarka adigoo hoos u dhigaya waxqabadka nidaamkaoo keenaya isku xirka shabakada liita. Ugu dambeyntii, kombiyutarka martigelinta ah wuxuu keenaa in badanaa la qaboojiyo inta lagu jiro xidhitaanka, bilowga iyo geedi socodkabilaabista barnaamij weyn. Sidaa darteed, waa shuruud u ah isticmaalayaasha kombiyuutarada inay ka saaraan virus Trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241laga bilaabo PC-ga sida ugu dhakhsaha badan loo ogaado. Si aad ugu guuleysatid inaad sidaan sameyso, hoos u dhig talooyinka ku xusan Julia Vashneva, hogaamiyahaKhabiir ka socda Sare .
Barnaamijyada antivirus rascal waxaa lagu qeexay dadaalkooda si ay ugu soo muuqdaan rasmi ahlaakiin dhab ahaantii waxay ku jirtaa kombiyuutarka, arimo kala duwan iyo dhibaatooyin ayaa dhacaya waxayna burburin karaan nidaamkaaga. Ma ahanwaxaa lagula talinayaa inaad iibsato 'casriyeynta' ee fayraska tan iyo markii ay jabhadayaashu u isticmaalaan si ay u helaan macluumaadka kaararka deynta iyo marba madhan xisaabta bangiga.
Sida looga saaro Trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241
Si looga saaro fayruskan, waxaa lagaa doonayaa inaad gacantaada ku nadiifisidin laga saaro dhammaan fayraska la xidhiidha faylasha ama isticmaalka software ka saarida si toos ah. Bilaabbeyayaashu looma oggolaanayo in ay isku dayaan in lagaa saaro gacanta haddii ay tahaywaxay keenaysaa in la sameeyo diiwaanka kombiyuutarka ee qarsoodiga ah. Waxaa lagaa doonayaa inaad si taxadar leh uga saarto qiimaha diiwaanka ee la xidhiidha Trojanfayruska, joojiyo dhaqdhaqaaqyada socodsiinta, ka saar faylasha LNK iyo DDL-da musuqmaasuqa, ugu dambeyntii tirtira dhamaan faylasha iyo faylasha lala xiriiriyofayraska. Qalad qaldan ee nidaamka buuggan ayaa kugu kici kara waxyaabo badan si aad u hagaajisid PC aan shaqeynin. Taasi waa sababta oo ah software-ka gawaarida si toos ah iyoxulo aalado yar oo yar ayaa ah mid muhiim ah waxaana lagula talinayaa in badan tan iyo markii uu kaydiyo waqti iyo lacag maadaama uu kumbuyuutarku mar kale shaqeynayo.
Talaabooyinka saarista ee gacanta
Mararka qaar barnaamijka nabadgelyada ee lagu rakibo kombiyuutarkaaga ayaa laga yaabaa inuu ku guuldareysto inuu ka takhalusoTrojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 virus. Muuqaalkaan, talaabooyinka buuggan soo socda ayaa loo isticmaali karaa.
1. Isticmaal maamulaha hawlgalka Windows si loo soo afjaro geedi socodka la xiriira.
2. Ka saar qiimaha diiwaanka feylka adigoo isticmaalaya diiwaanka diiwaanka.
3. Unregister Trojan-Dropper.Win42.ZomJoiner.241 Faylasha DDL adigoo isticmaalaya fariin Windows ah.
4. Aqoonsadaan oo tirtiraan faylasha kale ee cudurka qaba.
Fiiro gaar ah: Fayraskan Trojan wuxuu leeyahay nidaamyo dhowr ah oo ku shaqeeya asalka PC-gaiyo faylasha badan, sidaa darteed, in la saaro Trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 gebi ahaanba, waa in dhammaantood la tirtiro kale ee fayraska la rakibomar mar si otomaatig ah. Waxaa lagugula talinayaa in aad dhaqdhaqaajiso hab nabadgelyo leh marka gacanta laga saaro fayraska Trojan si loo ilaaliyo qiimaha diiwaanka muhiimka ah.
Gaaban, Fayraska Trojan wuxuu si weyn u dhaawici karaa kombiyuutarka illaa xaddiga qaadashada kaleNoocyada fayrasyada ah sida barnaamijka dib-u-kicinta iyo barnaamijka qallafsan. Dhibbanayaasha qaarkood ayaa laga yaabaa inay ku dhacaan weerarkan siman. Waxay u oggolaan kartaa gadaalhelitaanka afduubayaasha sababo xun. Ka saarida farriinta Trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 waxaa lagula talinayaa inay ka fogaadaan cabsiDhibaatooyinka maaddaama antivirus aysan si fiican wax uga qaban karin.